हराएकी छोरी २४ वर्षपछि भेटिँदा... | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
हराएकी छोरी २४ वर्षपछि भेटिँदा…
Published On : २१ चैत्र २०७४, बुधबार ०४:००
चैत २१, २०७४ चीनका एक ट्याक्सी चालकले सडकबाट हराएकी छोरीलाई साढे दुई दशकपछि फेला पारेका छन्। फलफूल व्यापारी वाङ मिङ र उनकी पत्नी ली यूले सन् १९९४ सडकपेटीबाट हराएकी छोरी २४ वर्षपछि पत्ता लगाएका हुन्। सडकमा फलफूल बेच्दै गर्दा मिङ ग्राहकलाई खुद्रा पैसा दिन अर्को पसलमा गएका थिए त्यही समयमा उनकी छोरी क्वी फिङ हराएकी थिइन्। छोरी हराएपछि मिङले ट्याक्सी चलाउन थाले।
सेवा लिएका १४ लाख यात्रुलाई ट्याक्सीको ढोकामा हस्ताक्षर गर्न लगाई उनले छोरी खोजिदिन आग्रह गरेका थिए। त्यो खबर एक पटक स्थानीय पत्रिका र टेलिभिजनमा पनि प्रसारण भएको थियो। एक स्थानीय प्रहरीले छोरीको अनुमानित ‘स्केच’ तयार पारे। उक्त तस्विरको सहायताले मिङले अाफूभन्दा २७ हजार माइल टाढा जिलिन शहरमा रहेकी छोरीलाई पत्ता लगाएरै छाडे। फिङका अाश्रयदाताले सडकपेटीमा अलपत्र भेटिएकी बच्चीलाई लगेर पालनपोषण गरेको बताए। एजेन्सी
बैशाख ३ सम्म लकडाउन थपियो
सरकारले लकडाउन ८ दिन थप गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बैशाख ३ सम्म
अमेरिकामा धेरै कोरोना संक्रमित
चीन र युरोपपछि कोरोना भाइरसको इपिसेन्टर बनेको अमेरिकामा विश्वकै सबैभन्दा बढी संक्रमित फेला परेका छन्
विदेशी अवैध नागरिकको सुरक्षित आरक्ष बन्दै गोरखा, रोहिंग्या शरणार्थी चारबर्षदेखि गोरखामा
बर्माको रखायनबाट सन् २०१२ मा भागेर नेपाल पसेका ३० बर्षका अबुल उस्मान सपरिवार गोरखामा बस्दै
गोरखा नगरपालिकाद्वारा १४ वटै वडाका श्रमिक महिलाहरुलाई सम्मान
गोरखा नगरपालिका गोरखाले एक सय १० औँ अन्तराष्ट्रिय श्रमिक महिला दिबसको अवसर पारेर श्रम गरेर